Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Olona 40 no maty, 213 naratra tamin'ny stampede fandevenana an'i Soleimani ao Iran
Araka ny fahitalavi-panjakana Iraniana, nahemotra ny fandevenana ny jeneraly Iraniana Qassem Soleimani taorian'ny nahatonga ny fandraisana anjaram-be iray nahatonga fitokonana goavana izay nahafaty olona 40 farafaharatsiny ary 213 kosa naratra. Mampiseho fatin'olona voahitsakitsaka amoron-dalana ireo horonan-tsary mampiseho ilay fifanosehana tamin'ny media sosialy.
Nipoaka ny tabataba tamin'ny talata teo nandritra ny filaharam-pandevenana, rehefa nilatsaka teny amin'ny araben'i Soleimani, tanànan'i Kerman, ny fanajana farany.
Ny sarin'ny filaharam-pandevenana dia mampiseho olona marobe mitafy lamba mainty. Ny sasany nitondra sainam-pirenena sy ny sarin'ny mpitarika Quds Force maty rehefa nizotra tsimoramora namakivaky ny tanàna izy ireo.
Ny haino aman-jery any an-toerana dia nilaza fa olona 'tapitrisa' no nanatrika ny fandevenana.
Noteren'ny vahoaka ny tompon'andraikitra hanemotra ny fandevenana an'i Soleimani, ilay tompon'andraikitra ofisialy ISNA, saingy tsy nanondro ny faharetan'ny faharetana ny masoivohom-baovao.
Novonoin'i a i Soleimani Fitokonan'ny drôna amerikana tany Baghdad tamin'ny herinandro lasa, niteraka andro fisaonana tao Iran. Lanonana fandevenana tao Tehran, natao ny alatsinainy teo, no voalaza fa nahasarika olona mihoatra ny iray tapitrisa, saingy tsy nisy ny naratra na maty mafy tany.